Global Voices teny Malagasy » Bangladesh: Cinema, politika, fahasalamana, saripika ary tantaram-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Janoary 2008 10:37 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Bangladesh, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Politika, Saripika, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Indro i Shafiur ao amin’ny imperfect world 2008 ( izao tontolo izao tsy lavorary) mizara amintsika ny afisy 8 amin’ny voangony efa mahatratra any amin’ny 500 any ho any hananantsika hevitra amin’izay atolotry Dhallywood amin’izao fotoana izao.
Ny Mpanao gazety mpaka sary malaza erantany Shahidul Alam no manazavazava ny eo ambony amin’ny alalan’ny sary andrana miresaka momba ny lalàna mihatra ankehitriny (na ny fahabangany) eto Bangladesh. Tsindrio eto raha hijery sary .
Vao nielipatrana tany amin’ny Bangladeshis rehetra tany ny taratasy imailaka miresaka ny fitsaboana tsizarizary niteraka fahafatesana marary iray tao amin’ny toera-pitsaboana tany Dhaka. Life in Eskaton no nanoratra  ny endriky ny toerana mampalahelo sy mahaontsa ananan’ilay toeram-pitsaboana sy ny fikarakarana tsy mandeha amin’izay laoniny misy ao.
Mbola mizara tantara hafa  amintsika ka ny fizahana toem-pahasalaman’ny rainy natao tany (amin’ny hopitaly tany) Dhaka no resahiny. Mila fitandremana manko ny mikarakara ny olonamarary fo. Nahatsipalotra ny soratra nipetraka tamin’ny tabilao ny reniny ka nanaitra ny dokotera mba hijerena haingana ilay fanadihadiam-pahasalamana.
Indreo asehon’i Russell John ao amin’ny BP Blog  (Bolongana ofisialin’ny mpaka sary Bangladeshi ) ny rakitry ny sary 110 izay aranty ao amin’ny Sidr Aid Photography Exhibition 2008  izay tontosaina ao Dhaka.
Nanao fikarohana lalindalina ka namoaka ny zavanitranga tokoa ny mpamaham-blongana Mashuqur Rahman sy mpanoratra ny tantaran’ny mpitolona ho amin’ny fahafahana M. M. Rahman Jalal  . Aza fady anie mba vakio ny lahatsoratra hahitanao ny marina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/01/31/610/
 Tsindrio eto raha hijery sary: http://shahidul.wordpress.com/2008/01/23/the-rule-of-law-2/
 no nanoratra: http://eskatonhighs.wordpress.com/2008/01/17/hospitals/
 mizara tantara hafa: http://eskatonhighs.wordpress.com/2008/01/28/the-day-the-worst-could-have-happened/
 BP Blog: http://bangladeshiphotographers.com/blog/?p=8
 Mashuqur Rahman sy mpanoratra ny tantaran’ny mpitolona ho amin’ny fahafahana M. M. Rahman Jalal: http://www.docstrangelove.com/2008/01/09/swadhin-bangla-betar-kendro-and-bangladeshs-declaration-of-independence/